လှေနံဓါးထစ် လွှတ်တော် ကို ပေးရမလား?
ကောင်းကင်ကို (ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ၊ ၂၀၁၄)
Posted by Kaung Kin Ko at 3:40 PM No comments:
၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ကျော်ကျော် .... လွိုင်ကော်
မြို့လယ်ခေါင်မှာ စက်ဘီးတွေ ပိုးလိုးပက်လက်
အိုအေစစ် စာအုပ်ဆိုင်ထဲ ဝင်ပြေးကြတယ်
မြေပြန့်သား ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ထူးဆန်းပေမဲ့
လွိုင်ကော်က အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်က
သမီးလေး မွေးတော့ လက်မထောင်တယ်
License to rape ဆိုတာ ကျွန်တော် သိခဲ့ပြီမို့
အဲဒီ အစ်ကိုကြီးအစား ဝမ်းနည်းရမလိုလို။
နောက် ပါးတစ်ဘက် မကျန်တော့ဘူး။
ကောင်းကင်ကို (၂၁ - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄)
Posted by Kaung Kin Ko at 2:27 AM No comments:
နဂါးအတု ဓာတ်ပုံကို ရောင်းပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့သူတွေ
ဒီမိုကရေစီအတု ပုံရိပ်နဲ့ မျှားပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေ
လေးစားရပါတဲ့ John Nash ရေ
ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ဝေဒနာထက်
ခင်ဗျားသီအိုရီအဖြစ်ကို မြင်ရသူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ဝေဒနာက
ကောင်းကင်ကို (သြဂုတ် ၃၀....၂၀၁၄)
Posted by Kaung Kin Ko at 1:36 PM 1 comment:
Fans တွေရဲ့ အချစ်ခံရတာကလည်း ကျိန်စာတစ်မျိုး
Fans တွေရဲ့ (မျက်ကန်းချစ်နဲ့) အချစ်ခံရတာကလည်း ကျိန်စာတစ်မျိုး.........
မန်ယူရဲ့ သဲသဲလှုပ် ပရိသတ်တွေ (မန်ယူကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းကြိုက်တာကနည်းနည်း...တခြားအသင်းတွေကို ချိုးနှိမ်ချင်တာက များများ ပရိသတ်တွေ)ကြောင့် မန်ယူကိုပါ မုန်းတဲ့သူတွေ ရှိလာတယ်။ ကျွန်တော်တောင် ပါလိုက်သေး ။ မဖြစ်သင့်ပေမဲ့ အဲလိုဖြစ်လာတယ်။ ဟိုလိုလင်းတတွေက ဂျိုကြွကြတာကိုး။
ဒေါ်စုရဲ့ သဲသဲလှုပ် ပရိသတ်တွေ (ဒေါ်စုကို နတ်ရုပ်လို လုပ်ပစ်လိုက်တာမျိုးတို့၊ မေမေဆိုပြီး အမြဲတမ်းတနေပြီးတော့ တခြားသူက အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် တစ်ခုလောက် ဝေဖန်သလို ပြောမိရုံနဲ့ ပြောမိတဲ့သူကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲမယ်၊ ဝိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်း တံဆိပ်ကပ်မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ) ကြောင့် တချို့ ဒေါ်စုကိုပါ မျက်မုန်းကျိုးလာတယ်။
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သဲသဲလှုပ် ပရိသတ်တွေ (တချို့က သူ့ကို အရူးအမူးစွဲလမ်းတာက နည်းနည်း၊ တခြားအဆိုတော်တွေကို မျက်မုန်းကျိုးတာက များများ) ကြောင့် တချို့ မပြည့်ဝတဲ့သူတွေက ထူးအိမ်သင်ကို ပြန်ပုတ်ခတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ screenshot တွေ တွေ့ကြမှာပါ။
ထူးအိမ်သင် ကိစ္စကို ဆက်ရေးရရင်တော့
(၁) အဆိုတော်တချို့တွေ မမီကြမှာကို အစကတည်းက တော်တ်ာများများက ကြိုတွေးမိတယ်။ သီချင်းတွေ ဆိုပြီးတဲ့အခါ ဝေဖန်ကြတာကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲမလုပ်ရသေးခင်ကတည်းက …..( ဝေဖန်သူအများစုက) လွဲချော်နေတာကိုတော့ အချက်နဲ့ ပြောပြချင်တယ်။
(၂) လုပ်စားတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ကိစ္စ။ အများစုက (အစက) မြင့်မိုးအောင်တို့ ရွှေဂျော်ဂျော်တို့ကို လုပ်စားတယ်လို့ ပြောကြတာ။ ပိုက်ဆံက သူတို့ ယူမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အစကတည်းက ရှင်းနေတယ်။ ပြီးတော့ ပွဲလုပ်လို့ နာမည်ရစရာလည်း ရှိမလာဘူး။ အစီအစဉ်ညံ့လို့ အဆဲခံရချင် ခံရဖို့ပဲ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ မိသားစု သဘောမတူဘဲနဲ့ ဘယ်လိုပွဲမျိုးကို ဘောင်ကျော်ပြီး လုပ်ခွင့်ရမှာလဲ။ အစကတည်းက စဉ်းစားတတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်ပါ။ ထူးအိမ်သင်သီချင်းတွေက မြင့်မိုးအောင်နဲ့ ရွှေဂျော်ဂျော် နှစ်ယောက်တည်း ရေးတာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့မှာချည်း မူပိုင်ခွင့် ရှိမနေဘဲ ဘယ်လိုလုပ် လုပ်စားလို့ ရမှာလဲ? တွေးကြည့်ရင် အရှင်းကြီးဟာကို။
(၃) တချို့က မိသားစုက လုပ်စားတယ်လို့ ပြောကြပြန်ရော။ အဲဒါကတော့ တော်တော်ရက်စက်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နည်းတဲ့သူတွေပဲ။ သူ့အဖေကို သူတို့ထက် ဘယ်သူက ပိုချစ်မှာလဲ။ သူ့အဖေအနုပညာကို တချို့ပရိသတ် ပိုချစ်ကောင်း ပိုချစ်မယ်။ အဲဒါနဲ့ ကိုင်ပေါက်လို့တော့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုငှက်ပွဲလုပ်တာကို သဘောတူတဲ့ သူတွေထဲမှာ ကိုငှက်ရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရှိတယ်။ ဒီအဆိုတော်တွေဆိုရင် ကိုငှက်ကို မမီနိုင်မှန်း သိပေမဲ့ ကိုငှက်သီချင်းတွေအပေါ် သဘောထား ကျဉ်းမြောင်းမနေဘူး။ ကျန်တဲ့အဆိုတော်တွေကို အသားလွတ် အမြင်ကတ်မနေဘူး။ ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ချည်းပဲ ကိုငှက်ပရိသတ် ဆိုပြီး မောင်ပိုင်စီးတာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့။ နားမထောင်ချင်ရင် ရှင်းနေတာပဲ မကြည့်နဲ့ပေါ့။ ပြီးတော့ ပွဲရဲ့အကျိုးအမြတ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက ပရဟိတအတွက်နော်။
(၄) တချို့က ဝင်ဆိုမယ့် အဆိုတော်တွေ လုပ်စားတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒါလည်း လွဲနေတယ်။ အဆိုတော်တချို့ အနုပညာကို တန်ဖိုးမထားတာ၊ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း လုပ်သွားတာ မှန်ပေမဲ့ “လုပ်စားတယ်” လို့တော့ ပြောလို့ မရဘူး။ ပိုက်ဆံကို သူတို့ ရမှာလည်း မဟုတ်။ နာမည်လည်း ပိုကြီးလာမှာမဟုတ်။ အဆဲတောင်ခံရဦးမယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြိုသိနေတယ် (ကြိုသိမှာပေါ့။ တချို့က ဘယ်လိုဆိုဆို ကိုငှက်ကို မမီနိုင်မှန်း သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြိုသိနေမှာကိုး)။ တချို့ဆို အဆဲမခံချင်လို့ နုတ်ထွက်သွားတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ကို “လုပ်စားတယ်” လို့ စွပ်စွဲတာက လွဲနေပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ ညံ့တယ် ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံလို့ရတယ်။
(၅) မိကွန်ထော ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တချို့ fans တွေ က၊ သူက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှ မဟုတ်တာ။ (သီချင်းပျက်သလိုဖြစ်ပေမဲ့) ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကို သဘောတူပါတယ်။ အဖေအတွက် အမှတ်တရ ဆိုတာပဲ။ ကောင်းချင်မှ ကောင်းမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီထဲက တချို့သူတွေပဲ ပွဲလုပ်တာကိုကျ လုပ်စားတယ်ဆိုပြီး ပြောနေတယ်။ ပွဲကလည်း မိကွန်ထောတို့ မိသားစု လုပ်ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာပဲလေ။ ဒီတော့ သူကိုယ်တိုင် ဆိုတာ သီချင်းပျက်သွားသလို ဖြစ်လို့ ခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုရင် …..ပွဲလုပ်တာကိုလည်း ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာ ဘာအကြောင်းရှိသေးလို့လဲ။ သူကိုယ်တိုင် ဆိုတာရော၊ ကိုငှက်ညီ ဆိုတာရော၊ တခြားအဆိုတော်တွေ ဆိုတာရောက သူတို့မိသားစုဆန္ဒအရ လုပ်တာပဲလေ။ မိကွန်ထော ဆိုလို့ သီချင်းလေးတမျိုးဖြစ်သွားတာကျ အပြစ်မမြင်ပေမဲ့၊ မိကွန်ထောတို့ ပွဲလုပ်တာကျ အပြစ်မြင်နေပြန်ရော။ အဲဒီလူတွေဟာ ရှေ့နောက်မညီဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မိကွန်ထောအပေါ်မှာ အဖေ့အရှိန်နဲ့ သံယောဇဉ် ရှိလို့ မပြောကြဘူးဆိုတာမျိုး ရေးကြတယ်။ တကယ်သံယောဇဉ်ရှိရင် ပွဲလုပ်တာကိုလည်း ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မတိုက်ခိုက်သင့်ဘူးလေ။
(၆) မူရင်းကို ပြန်ဆိုတဲ့ နောက်တော့ ပကတိအတိုင်းတော့ ရှိမနေနိုင်တော့ဘူး။ တစ်ခုခုကတော့ ပဲ့ပါသွားမှာပဲ။ ကိုငှက်ကိုယ်တိုင် ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေလည်း ရှိတာပဲ။ အသံနဲ့ ဆိုပုံကြောင့် မဟုတ်ပေမဲ့ စာသားကြောင့် ပျက်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဘွန်ဂျိုဗီသီချင်းတွေ ကီးချင်းမတူလို့ မူရင်းကို မမီသလို ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတာပဲ။ (ကိုငှက်ကတော့ သီိချင်းတိုင်းကို လေးလေးစားစား အဆင့်မြင့်မြင့် ဆိုရှာပါတယ်) ဥပမာ ပေးရရင် ဒါမျိုးသီချင်း။ မိဘမေတ္တာကို မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ဖွဲ့ထားတာ။ http://www.youtube.com/watch?v=qX9YX3XZ8S0&index=5&list=PLgi2Nf-t3v6dsIdfj8vz0sG6dEPnBm13l မြန်မာမှာက အဲဒီသီချင်းက (သီချင်းများနဲ့လူ) အဲဒီသီချင်းက ထူးအိမ်သင် အရင်ဆိုခဲ့ဖူးသူလည်း ရှိတယ်။ အဲလို စာသားကြောင့် ပျက်သွားတာမျိုးတွေ ရှိတာပဲ။ Bow Down, Minister ဆို ဟိန္ဒူဘာသာရေးသီချင်း။ မူရင်းကို နားစွဲခဲ့တဲ့သူတွေသာ သိရင် ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သဘောထားကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ သူ့သီချင်းကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကော်ပီလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အခြေအနေအရသာ စာသားပြောင်းလိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် (ခွင့်မတောင်းပဲ ဆိုတာတောင်) ဝမ်းသာမှာပါ။ ကိုယ့်အနုပညာကို ကြိုက်လို့ လိုက်တုတာ (ငွေရေးကြေးရေးတွေ မပါဘူးဆိုရင်၊ credit လည်းပေးတယ်ဆိုရင်) ဝမ်းမသာဘဲ ရှိမလား။ ဝမ်းသာခွင့်လွှတ်မှာပါ။ Michale Learns လာတုန်းက သူ့ဟာကို ကော်ပီလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ တူတူဆိုသွားသေးတာ မဟုတ်လား။ အခု လူတွေကျမှ ဘာလို့ ဒီလောက် သဘောထား သေးသိမ်နေရလဲမသိ။ (လူတိုင်းကို ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့သူဆို လုံးဝ ဆိုခွင့်မပေးနဲ့ ပုံစံမျိုး ပြောတဲ့သူတွေကို ပြောတာ)။
(၇) တချို့ဝေဖန်တာတွေကတော့ အသံမတူလို့တဲ့။ တူအောင်ဆိုခိုင်းသင့်တယ်တဲ့။ အဆိုတော်တွေကို အသံတုဝိဇ္ဇာ ကြယ်တစ်လုံးများ ထင်နေကြလားမသိ။ ဒါမှမဟုတ် စီဒီဖွင့်ပြီး ဆိုချင်ယောင် ဆောင်ခိုင်းရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုငှက်အမှတ်တရပွဲမှာ ကိုငှက်သီချင်းမဆိုကြပဲ ကိုယ့်သီချင်းကိုယ် ဆိုကြ ဆိုပြီး လုပ်ကြမှာလား။ အဲဒါဆို ဘယ်လိုလုပ် အမှတ်ရစရာ ကောင်းမလဲ။
အခုလိုပွဲလုပ်လိုက်တော့မှ သျှီလိုဆိုတာကောင်းရင်လည်း ကိုငှက်ကို သတိရစရာဖြစ်၊ တခြားညံ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဆိုလိုက်တော့လည်း ကိုငှက်ကို ပိုပြီး တမ်းတစရာတောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ဒီလိုပွဲမလုပ်ခင်တုန်းက ရှစ်နှစ်ပြည့်တို့၊ ကိုးနှစ်ပြည့်တို့မှာ သတိရတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက် ပါလို့လဲ။ (အဲဒါကိုလည်း အပြစ်မပြောပါဘူး။ သီချင်းနားထောင်ချင်တဲ့အချိန်နဲ့ သူ့အကြောင်း တစ်ခုခုတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ပဲ သတိရမှာပေါ့)။ အခုပွဲလုပ်လိုက်တော့ရော သတိရစရာတွေ ဖြစ်မလာဘူးလား။
(၈) အနုပညာရှင်ရဲ့ အနုပညာ ပစ္စည်းကို ပရိသတ်ကပဲ ပိုင်တယ်။ မိသားစုက မပိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ မိသားစုကို ကန့်ကွက်တာလည်း တော်တော် မတရားတာပဲ။ အဲဒီအခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်ချင်ရင် တခြားတစ်ခုခုနဲ့ ပြန်လုပ်ပေးဖို့ ပြန်ကြည့်ပေးဖို့တော့ လိုမှာပေါ့။ ထူးအိမ်သင် fans တွေစုပြီး ငွေကြေးကောက်ခံပြီး လှူတာမျိုး (ခုချိန်ထိ) ဘယ်သူက လုပ်သေးလို့လဲ။ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူ မဆိုစေချင်ရင် မူပိုင်ခွင့်ကို ထူးအိမ်သင် fans တွေ စုပြီး အပြတ်ဝယ်လိုက်တာမျိုး လုပ်မှ မိသားစုအပေါ် တရားမျှတရာ ကျမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြားတစ်ခုခုလုပ်ပေးသင့်တာပေါ့။
(၉) ကျွန်တော်ကတော့ ထူးအိမ်သင် မိသားစုဟာ…. တခြား ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တွေရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ မတူပဲ……..သမီးလေး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်၊ အဖေရဲ့ သီချင်းကို ပရိသတ်တွေ အများကြီးရှေ့မှာ ဆိုခွင့်ရအောင် ဒီလိုပွဲကို နှစ်တွေအများကြီးစောင့်ပြီးမှ လုပ်တာကို ချီးကျူးချင်နေတယ်။ ငွေအတွက် သက်သက် ဆိုတာထက် ပိုတယ်။ လှတယ်လို့လည်းမြင်တယ်။ ဒီလိုပွဲက ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းထက် (မကောင်းတာတွေကိုလည်း ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်) အမှတ်တရ လုပ်တာမို့ “လုပ်စားတယ်” ဆိုတာမျိုး မစွပ်စွဲသင့်ပါဘူး။ အမှတ်တရ ပွဲမဟုတ်ဘဲ သာမန်ခွေမျိုးမှာ ထူးအိမ်သင်သီချင်းကို ဝယ်ဆိုတာမျိုး ဆိုရင်သာ လုပ်စားတယ်လို့ ပြောလို့ရဦးမယ်။
(၁၀) အဆိုတော်တွေ ညံ့တာ၊ ပွဲအစီအစဉ် ညံ့တယ်လို့ စာဖတ်သူက ယူဆမယ်ဆိုရင် ညံ့ကြောင်းဝေဖန်တာတွေကိုတော့ သဘောတူပါတယ်။ ဝေဖန်ခွင့်ကို လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲမလုပ်ရဘူး၊ ခွေမထုတ်ရဘူး ဆိုတာတွေကတော့ ထမင်းရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ အနုပညာရှင်ရဲ့ မိသားစုကို အနိုင်ကျင့်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ တကယ်တော့ ပရိသတ်တို့ ထမင်းရှင်တို့ဆိုပြီး ထူးအိမ်သင်ကို ခင်ဗျားတို့ချည်း မောင်ပိုင်စီးရအောင်ကလည်း tape ခေတ်ကနေ စီဒီခေတ်အထိ ထူးအိမ်သင်ခွေတွေ ဝယ်ခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းပါတယ်။ ဒီတော့ ထူးအိမ်သင်ပရိသတ်ထဲမှာ မိသားစု အစီအစဉ်ကို ဆန့်ကျင်မယ့်သူတွေချည်းပဲ လို့ တရားသေမတွက်ပါနဲ့။ ကိုငှက်ကို မောင်ပိုင်မစီးချင်ပါနဲ့။ မိသားစု စိတ်ကျေနပ်မယ်ဆိုရင် ကြိုက်တာလုပ်ပါစေဆိုတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကိုငှက်အခွေတွေကို မီးရှို့ပစ်တာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ ဘယ်သူတွေပဲ ဆိုဆို ကိုငှက်သီချင်းတွေတန်ဖိုးက သူ့စာသားတွေ၊ သူ့အသံတွေပေါ်မှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ဟာမျိုး။ ကိုငှက်သီချင်းတွေက မှတ်ကျောက်အတင်ခံပြီး ပိုတောက်ပြောင်လာသလို ဖြစ်ဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 8:40 PM No comments:
ကောင်းကင်ကို (ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၄)
Posted by Kaung Kin Ko at 10:25 PM No comments:
Posted by Kaung Kin Ko at 11:38 AM No comments: